Byare June 12, 2018
(Europe) 12 Juunyo 2018. Waxaan dib u amba qaadi doonnaa xubinteenii Saakay iyo Wargeysyada oo inoo socon doona inta uu ka xiramayo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda insha’alaah.
Kaddib markii ay heshiisyo waqti dheer ah la gaareen Mauricio Pochettino iyo Harry Kane, Tottenham ayaa lagu wadaa inay heshiis cusub la gaarto Xiddiga reer England ee Dele Alli 22-jir kaa oo Usbuuciiba ku kacaya 100,000 oo bound . (London Evening Standard)
Liverpool uma badna inay sameyso dalab si ay Roma ugala soo saxiixato goolhayaha reer Brazil Alisson, 25-jir. (Sky Sports)
Alisson ayaa doonaya in la xaliyo mustaqbalkiisa ka hor inta aysan Brazil Axada bilaabin olalaheeda koobka adduunka marka ay wajaheyso Switzerland . (ESPN)
Arsenal ayaa ku jirta wada hadalo ay kula soo saxiixaneyso Xiddiga qadka dhexe ee daafaca Sampdoria ee ku kacaya 22-milyan Lucas Torreira, 22-jir kaa oo koobka adduunka u ciyaaraya Uruguay. (Mail)
Macallinka Manchester United Jose Mourinho ayaa doonaya Saxiix kale oo cusub ka hor Koobka Adduunka wuxuuna soo nooleyn karaa u dhaqaaqistiisa daafaca Tottenham Toby Alderweireld ee lagu qiimeeyay 50-milyan oo bound. (Sun)
Yeelkede, Kuwa wax u soo indho indheeya Manchester United kuma qanacsana Alderweireld waxayna ka fikirayaan badel kale, sida ay sheegayaan ilo wareedyo heer sare oo kooxda ah. (Manchester Evening News)
Goolhayaha xulka 21-jirkada England Dean Henderson, 21-jir kaa oo la aamisan yahay inuu bartilmaameed u yahay Arsenal iyo Chelsea ayaa lagu wadaa inuu qandaraas cusub u saxiixo Manchester United. (Mail)
Daafaca cusub ee Garabka Midig Manchester United Diogo Dalot ayaa la soo sawiray isagoo biro ku kutubaya dhacdo lagu qabtay Manchester. (Express)
Manchester United malahan wax qorshooyin ah ay xagaagan kula soo saxiixaneyso daafaca reer Brazil ee kooxda Juventus Alex Sandro 27-jir, balse suuqa ayay ku jiraan si ay u helaan daafaca garabka bidix haddii la helo dooqa saxda ah. (Manchester Evening News)
Liverpool ayaa isku daba ridi doonta dadaalkeeda si ay u soo xiro galiso xiddiga qadka dhexe ee reer Switzerland iyo kooxda Stoke City Xherdan Shaqiri, 26-jir, marka uu ka soo laabto World Cup. (Mirror)
Hazard oo Walaac galiyay Taageerayaasha Belgium xilli uu 2-maalmood ka harsan yahay Koobka Adduunka
RUMAYSO AMA HA RUMAYSAN: Miyaad og tahay inuu jiro Ciyaaryahan hal kulan horyaalka Soomaaliya ka dhaliyay 13 gool